Archdiocese of Mandalay blog: အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း(၄)
သက္ကရာဇ် ၁၅၃၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၀) ရက်နေ့တွင် သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး သတ္တမမြောက် ကလဲမင်း (POPE CLEMENT VII) သည် ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်း (BARNABITE) ကို ကက်သလခ်အသင်းတော်၏ တရားဝင် သာသနာအမှု့တော်ဆောင် အဖွဲ့အစည်းအသင်းဂိုဏ်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုး ကြေညာခဲ့သည်။
ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းကို ဘုန်းတော်ကြီး အန်တိုနီယို မာရီယား ဇာခရီးယား (ရဟန္တာဖြစ်ပြီး) REV.FR. ANTONIO MARIA ZACCHARIA (canonized) ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ဘာရ်သလေမီ ဖယ်ရာရီ REV.FR.BARTHLEMI FERRARI နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ယာကုပ်ဘို မော်ရိဂျီးယား REV.FR.JOCOBO MORRIGIA တို့မှ ဦးဆောင် ပြုလုပ်၍ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်း၏ မူလဘွဲ့ အမည်ခံမှာ REGULARS CLERIC OF ST.PAUL သံပေါလူး၏ တမန်တော်များအသင်းဂိုဏ်း ဟုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အသင်းဂိုဏ်းကို စတင် တည်ထောင်ပြီး၊ များမကြာမီ အချိန်ပိုင်းမှာတွင် သံပေါလူး၏ တမန်တော်များ အသင်းချုပ်ကြီးသည် အီတလီပြည် မီလန်းမြို့ရှိ စိန်ဘားရ်နားဘတ်စ် SAINT BARNABAS ဘွဲ့အမည်ခံ ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကို စီမံ ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်ရန် အထက် သာသနာပိုင် အကြီးအကဲများထံမှ တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း လက်ခံ ရရှိခဲ့သည်။ စိန်ဘားရ်နားဘတ်စ် ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကို တာဝန် ယူထမ်းဆောင်ချိန်မှ အစပြု၍ သံပေါလူး၏ တမန်တော်များ အသင်းအဖွဲ့သည် မိမိတို့၏ ဗဟိုရ်ဌာနချုပ်နှင့် စိန်ဘားရ်နားဘတ်စ် ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးအား ဆက်စပ် အစွဲပြု၍ သံပေါလူး၏ တမန်တော်များကို “ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်း” (BARNABITES) ဟုခေါ်ဝေါ် လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်း၏ ဦးတည်ချက်များမှာ၊ တမန်တော်ကြီး သံပေါလူး၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ စာစောင်တော်များကို လက်စွဲပြုကြလျှက် ခရစ်ယာန် အသိတရား စိတ်ဓာတ် အပြည့်အ၀ထားရှိကြပြီး မိမိတို့ ခံယူချက်ရှိသည့်အတိုင်း ကျင့်ဆောက်တည်ကြရန်နှင့် ဟောပြော
သွန်သင်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အသင်းဂိုဏ်း၏ အဆိုပါ ဦးတည် ရည်မှန်းချက်များကို စာရိတ္တပြုပြင်ပေးရေး ကဏ္ဍ၊ ပညာရေး ကဏ္ဍ၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ အသီးသီးများမှ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပေးကြလျှက် ဖြည့်စည်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ လူငယ်ဂေဟာများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ရာဇ၀တ်မှု့ ကျူးလွန်သူများအား ပြုစုပျိုးထောင် ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ အကျဉ်းထောင်များသို့ သွားရောက်၍ ဆုံးမ သွန်သင် ဟောကြားခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးကြသည်။ ပညာရေးဘက်တွင် အခြေခံ အဆင့်မှသည် တက္ကသိုလ်ပညာရေး အဆင့်အထိ သင်ကြားပို့ချပေးသော ကျောင်းများကို ဖွင့်လှစ်သည်။ ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတွင်လည်း အထူးသဖြင့် မရှိ ဆင်းရဲသားတို့အား အထူးဝါယမ စိုက်ကာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသည့် ဆေးရုံကြီးငယ်များကို နေရာအသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။
ဘားရ်နားဘိုက်အသင်းဂိုဏ်းသည် ဥရောပတိုက်တစ်ခွင်ရှိ အီတလီပြည်၊ ပြင်သစ်ပြည်၊ သြစတီးယားပြည်၊ ဘိုဟေးမီးယားပြည် အစရှိသော တိုင်းပြည်များတွင် သာသနာရေးလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အသင်းဂိုဏ်း၏ သာသနာရေးလုပ်ငန်းများ၌ ကျယ်ပြန့်မှု့ ရှိသကဲ့သို့အသင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်း အရည်အသွေး၊ အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်ဝသောသူများအဖြစ် များစွားမှပင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၀ိဇ္ဇာ/သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များကို ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းအဖွဲ့တွင် များစွာတွေ့ရှိရသည်။ တစ်ပါးသော သူတို့၏ အကျင့်စာရိတ္တ မဏ္ဍုင်ကို ပြုပြင် မြှင့်တင်ပေးရခြင်းမှာ မိမိတို့အသင်းဂိုဏ်း၏ ဦးတည် ရည်မှန်းချက် တစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အလျောက်၊ အသင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုယ်တိုင်ပင် ကိုယ်ကျင့်တရား ပြည့်ဝ စုံလင်မှု့ ရှိကြပြီး၊ အရာရာတွင် အနစ်နာခံယူတတ်ခြင်း၊ ဖြူစင်သော မေတ္တာစေတနာ တရားထားရှိတတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန် ကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ဇွဲသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသည့်လုံ့လ ၀ရိယရှိခြင်း၊ စသည့် မွန်မြတ်သော ကိုယ်ကျင့်တရား ပြည့်ဝသူ ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ သမိုင်းစဉ် တလျောက်၌ သာသနာလုပ်ငန်းခွင်တွင် ထူးချွန်စွာ ထမ်းရွက်သွားခဲ့ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား ကက်သလခ်အသင်းတော်မှ “ရဟန္တာ” ဘွဲ့များကို ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း အသင်းတော် သမိုင်းတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၇၀၃ ခုနှစ်တွင်၊ တရုတ်ပြည်ရှိ ကန်တုံမြို့ ကက်သလခ် သာသနာသည် ဘာသာရေး ပြသနာတစ်ရပ်ဖြင့် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဘာသာရေးပြသနာမှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဘုရားဝတ်ပြု ကိုးကွယ်မှု့ အခမ်းအနားများတွင် တရုတ်အမျိုးသားများ၏ မိရိုးဖလာ ကျင့်သုံးသည့် ရှေးထုံးတမ်းများကို ကျင့်သုံးပြု ပိုင်ခွင့်ရှိ/မရှိပင် ဖြစ်သည်။ သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဒသမမြောက် ကလဲမင်း POPE CLEMENT X လက်ထက်ကလည်း အဆိုပါ ဘာသာရေးပြသနာရပ်ကို ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးခဲ့ဘူးသည်။ သို့သော် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရာ၌ အောင်မြင်ခြင်း အပြည့်အ၀ မရရှိခဲ့သဖြင့် ယခု တဖန် ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သက္ကရာဇ် ၁၇၁၆ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖရန် ချက်စကိုရိုဗဲရို Father Francesco Roveri သည် ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းချုပ် တာဝန်ခံ အမှု့တော်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ချိန်ဖြစ်သည်။ ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းချုပ်ကြီးထံသို့ ရောမမြို့-သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ဌာနချုပ်မှ စာချွန်လွှာတခု ရရှိခဲ့သည်။ ထိုစာချွန်လွှာ၌ ဖော်ပြပါရှိချက်မှာ၊ အရှေ့တိုင်းပြည်များ၌ ကက်သလခ် ခရစ်ယာန်သာသနာ ထွန်းကားခဲ့ပြီးမှာ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သာသနာတော်၏ သက်တမ်း ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်ရှိကြောင်း၊ သာသနာတိုးချဲ့လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်သစ်များကိုလည်း အပူတပြင်း လိုအပ်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ စသည်တို့ပါရှိခဲ့လေသည်။ ထိုနောက် သာသနာတော်ဌာနချုပ်၏ အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များကို ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းကြီးမှပင် ကမကထပြုခါ ပါဝင် ဖြေရှင်း လုပ်ဆောင်ပေးကြစေလိုကြောင်း၊ ရောမမြို့ -သာသနာပြန့်ပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ် ကိုယ်တိုင်က ၄င်းတို့အား မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းချုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ဖာသာရ် ဖရန်ချက်စကို ရိုဗဲရီသည် ရောမမြို့-သာသနာ ပြန့်ပွားရေးဌာနချုပ်မှ ပေးပို့သော စာချွန်လွှာကို ရလျှင်ရချင်း မိမိအသင်းဂိုဏ်းဝင် အမှု့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အတူ တွေ့ဆုံ စည်းဝေးခဲ့လေသည်။ ယင်း အမှု့ဆောင်များ အစည်းအဝေးမှ ရောမမြို့-သာသနာပြန့်ပွားရေးဌာနချုပ်၏ တောင်းဆိုလာမှု့ အပေါ် ငြင်းဆိုခြင်းမရှိ ကြိုဆို လက်ခံခဲ့ကြလေသည်။ မိမိတို့ အမှု့ဆောင်များ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များအား သိသာစေရန်နှင့် သာသနာတိုးချဲ့လုပ်ငန်းများ၌ စိတ်ပါဝင်စားသူ အသင်းဂိုဏ်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များကို မိမိတို့ အမည်စာရင်းများ ပေးသွင်းကြပါရန်လည်း တချိန်တည်းမှာပင် ကြေညာ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့လေသည်။ အသင်းဂိုဏ်းချုပ်၏ ဖိတ်ခေါ်စာကို ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ် (၄၀) ဦးတို့က အမည်စာရင်း ပေးသွင်းကြလျက် ထောက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဝင်တို့၏ အရှေ့တိုင်းသို့ပထမဆုံးသော ခရီးစဉ်
အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့် တရုတ်ပြည်-ကန်တုံမြို့ ဘာသာရေးပြသနာရပ်၏ ဖြေရှင်းချက်သည် ပြီးပြတ်ခြင်း မရရှိသေးသဖြင့်၊ သက္ကရာဇ် ၁၇၁၉ ခုနှစ်တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဧက ဒသမမြောက်ကလဲမင်း POPE CLEMENT XI မှ ရောမမြို့-သာသနာပြန့်ပွားရေးဌာနချုပ်အား အဆိုပါ ဘာသာရေးပြသနာတစ်ရပ်ကို ဆောလျင်စွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးရန် ကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန် သတ်မှတ်ပေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့လေသည်။ သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ညွှန်ကြားချက်အရ သာသနာပြန့်ပွားရေးဌာနချုပ်သည် တရုတ်ပြည်သို့ စေလွှတ်မည့် သာသနာရေး မီရှင်တစ်ရပ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း သတ်မှတ်ပေးခဲ့လေသည်။
၁။ ဥက္ကဌ။ ဆရာတော် ကာရ်လို အမ်ဘရိုဂျီယို မယ်ဇာဘားရ်ဘာ
REV.MGR. CARLO AMBROGIO MEZZABARBA
၂။ အဖွဲ့ဝင်။ ဘုန်းတော်ကြီး အော်နိုရာတို မာရီးယား ဖယ်ရာရီ
Rev.Father Onorato Maria Ferrari of Vercelli in Piedmont
၃။ အဖွဲ့ဝင်။ ဘုန်းတော်ကြီး စီဂျစ်မွန်ဒို မာရီးယား ကာလ်ချီ
Rev.Father Sigismondo Maria Calchi of Milan
၄။ အဖွဲ့ဝင်။ ဘုန်းတော်ကြီး အလက်ဇန္ဒြု
Rev.Father Allesandro De-Allesandri of Bergamo
၅။ အဖွဲ့ဝင်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဖီလီပို မာရီယား ချေဆာတီ
Rev.Father Filippo Maria Cesti of Milan
၆။ အဖွဲ့ဝင်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဆာလာတိုရေ ရာဇီးနီ
Rev.Father Salvatore Rasini of Nice
ဆရာတော် ကာရ်လို အမ်ဘရိုဂျီယို မယ်ဇာဘားရ်ဘာ ဦးဆောင်သော သာသနာရေးကော်မတီဝင် အဖွဲ့ဝင် ငါးဦးတို့သည် ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းမှ လက်ရွေးစင် ရွေးချယ်ပေးလိုက်သော အသင်းဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီးများလည်း ပါဝင်ကြသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၇၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၅)ရက်နေ့တွင် ဆရာတော် ကာရ်လို အမ်ဘရိုဂျီယို မယ်ဇာဘားရ်ဘာ ဦးဆောင်သော သာသနာရေး တမန်တော်အဖွဲ့သည် အီတလီပြည်မှ သင်္ဘောခရီးစဉ်ဖြင့်စတင် ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ သိပ္ပံပညာ စွမ်းအား မထွန်းကားသေးသော ထိုခေတ် ထိုအချိန်အခါက အရှေ့တိုင်းဟူသည် အရှေ့အနောက် ကွာဝေးသလောက် ဥရောပတိုက်နှင့်ကင်းဝေး ခြားနားလျက်ရှိသည်။ နှောင်းတခူး၏ လေပြေလေမြူး၊ မုတ်သုန်ဦး၏ လေဝေလေရူးတို့ဖြင့် အပြောကျယ်လှသည့် သမုဒ္ဒရာ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ဖြတ်သန်းသွားလာရာမှာ အလွန် ခဲယဉ်းပြီး ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ကြရသည်။
အီတလီပြည်မှ ထွက်ခွာလာခဲ့သော သင်္ဘောကြီးသည် တစ်နွေကုန်၍ တစ်မိုးပင် ဖြိုင်ဖြိုင်ရွာသွန်းလေပြီ။ သို့သော် သာသနာရေး တမန်တော်များ မျှော်မှန်းလာခဲ့ကြသော အရှေ့တိုင်းကား အရိပ်အရောင်မျှပင် မမြင်နိုင်ခဲ့ကြသေးပေ။ အရာမထင်လှသည့် သမုဒ္ဒရာ ရေပြင်ကြီးကိုသာ နေထွက်ချိန်မှ နေ၀င်ချိန်တိုင်အောင် တွေ့မြင်နေကြရသည်။ ဘေးဒုက္ခ အမျိုးမျိုးနှင့်လည်း တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်ရသေးသည်။ ထိုသို့ တွေ့ကြုံခံစားရသော ဘေးဒုက္ခဟူသမျှကို သာသနာရေး တမန်တော်အဖွဲ့တို့သည် ကြံ့ကြံ့ခံယူကြလျှက် ရှေ့သို့သာ ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် သက္ကရာဇ် ၁၇၂၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် သာသနာရေး တမန်တော်အဖွဲ့တို့စီးနင်းလိုက်ပါလာသော သင်္ဘောကြီးသည် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းရှိ ကန်တုံမြို့ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့လေသည်။
တရုတ်ပြည်-ကန်တုံမြို့ သို့ရောက်ရှိလာကြသော ရောမမြို့၊ သာသနာရေး တမန်တော်အဖွဲ့သည် သာသနာပြန့်ပွားရေးဌာနချုပ်မှ ပေးအပ်လိုက်သော တာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြသနာတစ်ရပ်ကို ကွင်းဆင်း လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ယင်းပြသနာရပ်ကို သုံးလကြာမျှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ဖြေရှင်းပေးကြသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ကြပေ။ ထိုတွင်မက ဖြစ်ပွားနေသည့် သာသနာရေး ပြသနာဖြေရှင်းပွဲတွင် မလိုအပ်သော ၀ိရောဓိများ သက်ဝင်လာသဖြင့် တမန်တော်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်ဘေး အန္တရာယ်ကိုပါ ထိပါး ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ်ရာ အခြေအနေများထိ ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်၍ သာသနာရေးမီရှင်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဆရာတော်ကာရ်လိုသည် မိမိအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ မိမိတို့ ဖြေရှင်းပေးရမည့် ပြသနာရပ်သည် ဆူပူ လှုပ်ရှားမှု့များ သက်ဝင်လာနေသဖြင့် အချိန်ယူခါ ပိုမို ပီပြင်သည့် အေးချမ်းသော နည်းစနစ်ကို ရှာကြံ အသုံးပြု၍ ဖြေရှင်းပေးသင့်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ အချိန်ယူဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဝင် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကို တာဝန်ပေးအပ်လျှက် ကျန်ရှိသော အဖွဲ့ဝင်များမှာမူ မိမိနှင့်အတူ အီတလီသို့ ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၇၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ဆရာတော် ကာရ်လို အမ်ဘရိုဂျီယို မယ်ဇာဘားရ်ဘာ ဦးဆောင်သော သာသနာရေး တမန်တော်အဖွဲ့သည် တရုတ်ပြည်-ကန်တုံမြုမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ယင်းတို့၏ ခရီးစဉ်သည် မြန်မာပြည်ကို ဖြတ်ကျော်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလခ် သာသနာတော်သည် အထက်မြန်မာပြည်၌ အင်းဝ နေပြည်တော်တွင်၎င်း၊ အောက်မြန်မာပြည်၌ ပဲခူးမြို့တော်တွင်၎င်း၊ အသီးသီး အခြေစိုက် ထွန်းကားလျှက်ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်း(၁၅၀) ကျော်မျှပင် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ကာရ်လို အမ်ဘရိုဂျီယို မယ်ဇာဘားရ်ဘာသည် ကောင်းစွာလေ့လာ သိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပြင်အဆိုပါ သာသနာနယ်မြေ၌လည်း သာသနာပြုပုဂ္ဂုလ်များ အပူတပြင်းလိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်းကို ဆရာတော်သည် ထပ်လောင်း သတိပြုမိခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဆရာတော် ကာရ်လို အမ်ဘရိုဂျီယို မယ်ဇာဘားရ်ဘာသည် အခွင့်အခါကောင်းများကို အသုံးပြုလျက်၊ မိမိနှင့်အတူလိုက်ပါလာသော အဖွဲ့ဝင်များမှ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကိုရွေးချယ်ခါ၊ မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလခ်သာသနာ ဦးစီးမှုး တာဝန်ခံအဖြစ် လွှဲအပ်ခဲ့လေသည်။
ထိုတာဝန်သစ်တစ်ရပ်ကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်လိုက်သော ဘုန်းတော်ကြီးမှာ ဘားရ်နားဘိုက်အသင်းဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီး စီဂျစ်မွန်ဒို မာရီးယား ကာလ်ချီ Rev.Father Sigismondo Maria Calchi of Milan ပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စီဂျစ်မွန်ဒို မာရီးယား ကာလ်ချီသည် ရောမမြို့သာသနာပိုင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရုံးတော်မှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အဖြစ်ခန့်အပ်သော မြန်မာပြည်ကက်သလခ်သာသနာ၏ ဦးစီးမှုးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာပြည်ကက်သလခ်သာသနာတော်သမိုင်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီး စီဂျစ်မွန်ဒို မာရီးယား ကာလ်ချီ အားသာသနာ့သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂုလ်တပါးအဖြစ် သမိုင်း မှတ်ကျောက်တင်အပ်ပေသည်။ “ The Papal Legate (Mgr. Carlo Ambrogio Mezzabarba) appointed him (Calchi) the First Vicar Apostolic of the Kingdom of Pegu, Ava and Martaban. He was the mustard seed of the Permanent Catholic mission in Burma.” (၅)
(၅) THE GURADIAN-“THE EARLY CHATOLIC MASSIONARIES IN BURMA” 1962 August Pg.19
သို့ဖြစ်၍ ဘုန်းတော်ကြီး စီဂျစ်မွန်ဒို မာရီးယား ကာလ်ချီသည် မြန်မာပြည်ရောက် ဘားရ်နားဘိုက်အသင်းဂိုဏ်းဝင်များ၏ အင်းဝရောက်ခြေရာများတွင် ပထမဆုံးသောခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ရောမမြု -့သာသနာရေကြောင်းမှ သာသနာပြုပုဂ္ဂုလ်ကျော်လှေလောင်းတော်များသည် အင်းဝနေပြည်တော်ကြီးသို့ အစီအရီခင်းကျင်း၍ ချီတက်လာကြတော့မည်ဖြစ်သည်။
ရောမ-အင်းဝ သာသနာသမိုင်းရေကြောင်းခရီးစဉ်များသည် သွားချိန်တန်သွားကြလျက်၊ နားချိန်တန်နားကြပြီး၊ သာသနာ့အကျုးကို စွမ်းစွမ်းတမံသယ်ပိုးထမ်းရွက်သွားကြရင်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားထုတစ်ရပ်လုံးအကျုးကိုပါ သယ်ပိုးထမ်းရွက်သွားကြသည့် သာသနာပြုပုဂ္ဂုလ်ကျော်အချု့တို့၏ သမိုင်းအကြောင်းကို ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ ဆက်လက်လေ့လာဖတ်ရှ့ပါ။
မွေးနေ့၊။ ။ ၁၆၈၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၂) ရက်၊အီတလီ
ပျံလွန်တော်မူသောရက်။ ။ ၁၇၂၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၆) ရက်၊ အင်းဝ
(အသက်တော် ၄၂ နှစ်)